यी हुन् नेपाली फिल्मी क्षेत्रमा दर्शकले सर्वाधिक रुचाएका जोडीहरू, वेस्ट जोडी कुन? —
यी हुन् नेपाली फिल्मी क्षेत्रमा दर्शकले सर्वाधिक रुचाएका जोडीहरू, वेस्ट जोडी कुन?
२४ कार्तिक २०७६, काठमाडौँ । पछिल्लो समय नेपाल सिने क्षेत्रमा नयाँ कलाकारहरूको आगमन हुने क्रम निकै बढ्दो रहेको छ । कतिले सुरुवातीको पहिलो चलचित्र बाटै सफलता पाएर चर्चाको शिखरमा पुगेका छन् भने कतिले एकपछि अर्को चलचित्रमा काम गर्ने मौका समेत पाएका छैनन् । यस्तै सँगै काम गरेका केही नायक-नायिकाहरूको त दर्शकहरूले जोडी समेत बनाइदिने गरेका छन् ।
हुन त कलाकारलाई उचाइमा पुर्‍याउने भनेकै दर्शक हुन् । दर्शक बिना कलाकारको अस्तित्व नै छैन । पछिल्लो समयमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा यस्ता केही जोडीहरू छन् । जसलाई दर्शकले निकै नै रुचाएका छन् । अझ भन्नुपर्दा उनीहरू रियल जोडी भएको हेर्न चाहेका छन् भने यस्ता केही जोडी पनि छन् जो रिल र रियल जोडी पनि हुन् ।
निश्चल बस्नेत र स्वस्तिमा खड्काको जोडी नेपाली चलचित्र जगतमा निकै नै लोकप्रिय मानिने जोडी हुन् । यी दुई रियल जोडी हुन् । करिब ४ बर्ष अगाडी यी दुईको विवाह भएको थियो । निश्चल र स्वस्तिमालाई आदर्श जोडी समेत भनिने गरिएको छ ।
बर्षा राउत र सन्जोग कोइराला बर्षा राउत र सन्जोग कोइराला पनि दर्शकले सर्वाधिक रुचाएका जोडी हुन् । लामो समयको प्रेम सम्बन्ध पछि यी दुईले गतबर्ष फागुनमा विवाह गरेका थिए । यो जोडीको फ्यान फलोइङ निकै लोभलाग्दो रहेको छ ।
प्रियंका र आयुष्मान रिल मात्र नभएर रियल कपल पनि हुन् । यी दुईले एकसाथ थुप्रै म्यूजिक भिडियो र केही चलचित्रमा काम गरिसकेका छन् । दर्शकले यी दुईको जोडीलाई असाध्यै रुचाउने गरेका छन् ।
प्रदिप खड्का र जसिता गुरुङ
चलचित्र लिलिबिली मा एकसाथ काम गरेपछि प्रदिप र जसिताको जोडीलाई दर्शकले रुचाउन थालेका हुन् । यी दुई रियल कपल भने होइनन् । दुवैले एकअर्काबिच प्रेमीको सम्बन्ध नभएर राम्रो साथी मात्र भएको बताउँदै आएका छन् । तर दर्शक भने यी दुई रियल जोडी भएको हेर्न चाहन्छन् ।
पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठ
पछिल्लो समयमा दर्शकको अत्याधिक माया पाउन सफल कलाकार हुन् पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठ । यी दुईले रामकहानी मा एकसाथ गरेका थिए । त्यहि समयदेखि नै पूजा र आकाशको जोडीलाई दर्शकले खुब रुचाउन थालेका हुन् । यी दुई पनि प्रेमी प्रेमिका नभएर मिल्ने साथी मात्र भएको बताउँदै आएका छन् ।
पल र आँचल नेपाली सिनेवृतमा आँप जोडीको रुपमा परिचित छन् । यी दुईले थुप्रै म्यूजिक भिडियो र चलचित्रमा एकसाथ काम गरिसकेका छन् । पल र आँचलको जोडी दर्शकमाझ निकै नै लोकप्रिय छ । तर आँचलले डा.उदिप श्रेष्ठसँग आफ्नो प्रेम रहेको खुलासा गरिसकेकी छिन् । त्यसैकारण पल र आँचल रिलमा मात्र जोडी हुन् ।
अस्ट्रेलियामा भी’षण आगलागी, तिनको मृ’त्यु, हजारौँ विस्था’पित (तस्बिर सहित)
स्टेजमा आदित्य सँग डान्स गर्दागर्दै ढलिन् नेहा कक्कर (भिडियो सहित)
काठमाडौँ –नेपालि फिल्म ए मेरो हजुर ४ मा चर्चित नायक अनमोल केसीले अभिनय गर्ने पक्का भएको...
क्यानडामा खुलेकी एलिजा गौतम (तस्बिर सहित)
काठमाण्डौ । चर्चित पत्रकार ऋषि धमलाकि पत्नी तथा अनुराग फिल्मकि नायिका एलिजा गौतम अहिले क्यानडामा रहेकी...
‘ए मेरो हजुर ४’मा सुहानाको जोडी अनमोल होलान त ?
काठमाडौँ । गत वर्षको अन्त्यमा प्रदर्शनमा आएको झरना थापा निर्देशित चलचित्र ‘ए मेरो हजुर ३’ ले...